Carlo Ancelotti Oo Ka Hadlay Wixii Santiago Bernabeu Ka Dhacay Ee Kulankii Bayern Munich & Real Madrid- ‘Waxay Ahayd Cadaalad Daro Aduunku Arkayay” - Laacib.net
Carlo Ancelotti Oo Ka Hadlay Wixii Santiago Bernabeu Ka Dhacay Ee Kulankii Bayern Munich & Real Madrid- ‘Waxay Ahayd Cadaalad Daro Aduunku Arkayay”
Tababarihii hore ee kooxda Real Madrid isla markaana hadda ah macalinka kooxda Bayern Munich ee Carlo Ancelotti ayaa sheegay in cadaalad daradii ka dhacday Santiago Bernabeu uu aduunku arkayay balse ay Real Madrid taariikhda u gali doonto ay Bayern Munich soo reebtay.
Macalinka ree Talyaani ayaa arkayay kooxdiisa Bayern Munich oo guuldaro xun kala kulantay Real Madrid iyada oo ay jireen dhacdooyin badan oo Los Blancos ka caawiyay in ay Bavaria ku reebto siddeed dhaadkii Champions Leaque-ga. Ancelotti ayaa si faah faahsan uga hadlay wixii Bernbeu ka dhacay iyo sida uu u dareensan yahay.
Haddaba shabakada Gool24.net ayaa isha soo marisay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee uu Ancelotti sida cad uga hadlay waxanaad kaga bogan kartaan halkan isaga faah faahsan waraysigii uu bixiyay.
Carlo Ancelotti oo waraygsigan siiyay Corriere ayaa isaga oo kulankii Real Madrid ee Santiago Bernabeu ka hadlaya yidhi: ” Waxay ahayd cadaalad daro. Waxay gali doontaa taariikhda Real Madrid in ay reebtay Bayern Munich, laakiin aduunku wuu arkayay wixii Madrid ka dhacay. Wax caadiya may ahayn, waxaa jirta baahida loo qabo muuqaal caawiyaha garsooraha ee VAR”.
Ancelotti oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: ” Waxaan dawaan doonaa finalka aniga oo xiisaynaya, waxaanan taageeri doonaa kooxda sida ugu fiican u ciyaarta. Aniga ahaan Juventus waxay muhiim u tahay Buffon kaas oo ahaa mid ka mid ah ciyaartoydaydii, guushani waxa uu ugu guulaysan karaa waayihiisa ciyaareed ee cirka ahaa”.
Ancelotti oo waraysiga lagu waydiiyay in Morata uu kaydka Madrid ku jiro ayaa yidhi: “Sababtu waa Karim Benzema oo ah ciyaartoyga ugu fiican ee la ciyaari kara Cristiano Ronaldo, sidoo kale waxay haystaan Luka Modric, Sergio Ramos, Marcelo, Karim Benzema iyo kuwa kale”.Laakiin Ancelotti ayaa sheegay in ayna wax layaab ah ku noqon in caawiyihiisii Real Madrid ee Zinadine Zidane uu la guulaystay Real Madrid.